बिहेमा करोडौँ खर्च, माझी बस्ती अलपत्र ! « Nepali Digital Newspaper
बिहेमा करोडौँ खर्च, माझी बस्ती अलपत्र !
२५ माघ २०७७, आईतवार १४:५३
लोभलाग्दो जीवनशैलीमा बाँचेकी श्वेतालाई खुल्लापत्र
एक वास्तविक समाजसेवीमा सेवाकर्मबाट आउने कुनै पनि प्रतिफलको लालच भने हुँदैन, हुनुहुँदैन । आफूले आर्जन गरेको ख्याती र सम्मानलाई समाजसेवामा जोडेर त्यसबाट अन्य आन्तरिक र बाह्य फाइदा पनि समाजसेवीले हेर्दैन, हेर्न हुँदैन । तर, आजकल साँच्ची समाजसेवा गरेर जनताको मन–मनमा बस्ने केही समाजसेवीलाई छाडेर भन्ने हो भने समाजसेवाको नाममा चर्चा बटुल्न खोज्नेहरूकै भीड देखिएको छ । ‘समाजसेवी’ बनेर वाहवाही बटुल्ने अनि त्यही नामलाई भजाएर व्यक्तिगत व्यापार–व्यवसायलाई बढावा दिने गजबको शैली अपनाएका छन् कथित समाजसेवीहरूले ।
तपाईंको शान बढाउन, तपाईंको विज्ञापन गर्न वा तपाईंको ख्यातीलाई बृहत बनाउन अब मनकारी दाताहरूले किन सहयोग गर्ने ? भन्नेले त तपाईंले हरेक दिन क्लब जाने र आलीशान जीवन बिताइरहेको रकमबाट थोरै रकम झिक्दा पनि माझी बस्तीलाई पुग्छ पनि भनेका छन् । तर तपाईं भने अझै दाताहरूसँग गुहार लगाइरहनुभएको छ । आफ्नो बिहेको करोडौँ खर्च गर्वका साथ सार्वजनिक गर्ने तपाईंले आजसम्म देश तथा प्रवासमा रहनुहुने नेपाली दाताले तपाईंमाथि विश्वास गरेर खाइ–नखाइ पठाएको रकम सार्वजनिक गर्नु पर्दैन ? आफूले सुरूवात गरेको काम पूरा गर्न नसकेकोमा तपाईंलाई पछुतो छ भने तपाईंले आफ्नै खल्तीबाट रकम निकालेर काम फत्ते गर्नुस् न, कुरा काट्नेहरूको मुख नै बन्द हुन्छ । तब पो तपाईंको जयजयकार हुन्छ । यति गरेर देखाउन सक्नुहन्छ ?
जतिबेला माझी बस्ती शुरू गर्नुभयो, त्यतिबेला तपाईंको नाम प्रिय अभिनेता श्रीकृष्णसँग जोडिएको थियो र त्यो भावना वा आत्मियताले पनि तपाईंको सोच र काममा मनकारीहरूले साथ दिनुभएको थियो । तपाईंको सोच र दुःखलाई आफ्नै सोच र दुःख ठानेर दाताहरूले त्यतिबेला सहयोग गरे । तर, यतिबेला खोलामा धेरै पानी बगिसकेको छ । तपाईंको सम्बन्ध अब श्रीबाट अर्को पाटोमा पुगिसकेको छ । यतिबेला भावनात्मक रूपमा पनि तपाईंसँग मनकारी मनहरू टाढा भैसकेका छन् । अब अरुबाट सहयोग र साथको आशा नगरेर तपाईं आफै जुट्नुपर्ने भएको छ । स्वर्गीय श्रीकृष्णको नाम भजाउन अब तपाईंलाई नैतिक अधिकार पनि रहेन । अवश्य पनि तपाईंले पहिले जस्तो मनकारीहरूको साथ पाउनुहुन्न, यो वास्तविकता तपाईंले पनि बुझ्नुभएको छ । अब जे गर्नु छ आफै गर्नुपर्ने अवस्था छ । तपाईंको जीवनशैली, दैनिक खर्च र बिहेको रौनक हेर्दा तपाईं जस्तो ‘सम्भ्रान्त’ ब्यक्तिले अरूसँग मागेर वा हात फैलाएर समाजसेवा गर्न मिल्दैन । यसमा चित्त नबुझे तपाईंजस्तो मनकारी ‘समाजसेवी’ले पङ्क्तिकारलाई पक्कै क्षमादान दिनुहुने छ नै !
बलात्कारआरोपी कारागार चलान
एक वर्षअघि भएको बलात्कार घटनाका आरोपितलाई अदालतले कारागार चलान गरेको छ । सप्तरी जिल्ला न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद दाहालको इजलासले खडक नगरपालिका–७